Amaanka Garowe oo la adkeeyay iyo shir ka furmayo 15-ka bishaan.
Amaanka Magaalada Garowe ee Caasimada Maamulka Puntland ayaa maanta la adkeeyay waxaa magaaladaasi ka socda qaban qaabada furitaanka shirka Maal gashiga Puntland oo Maalinta Axadaa ka furmaya Garowe.
Ciidanka amaanka Maamulka Puntland ayaa geeyay wadooyinka iyo Xarumaha Muhiimka ah ee Magaalada waxaana lagu wadaa in Saacadaha Soo socda ay Garaan ergooyinka Caalamka ee ka qayb galaya shirka iyo Ganacsatada Soomaalida.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Muxuyadiin Axmed Muuse oo weriyaasha kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay diyaarinayaan ciidamo sugayo Amniga caasimada Puntland ee Garoowe,waxaana taliska uu ka hadlay hubka sharci darada ah ee magaalada lagu dhex-wato, Gawaarida Maraayada Madoow iyo Askarta aan dirayska wadan ee qoryaha Magaalada ku dhex qaata.
Taliyaha ayaa si adag uga hadlay hubka lagu wato magaalada waxa uu sheegay in guud ahaan hubka sharci darada ah la mamnuucay,iyada oo talisyada qeybaha la amray in ay qoryaha ka qaadaan askrata aan shaqada ku jirin.
Ganacsato, Shirkada waaweyn iyo kuwa yaryar, Wafuud ka socda Wadamada danaeeya in ay maalgashadaan Soomaaliya ayaa ka qayb shirka waxaa lagusoo bandhigayaa kaalinta Puntland ay ka qaadanayso ilaalinta hantid Gaarka loo leeyahay iyo sidii Puntland u xaqiijin karto.
15-ka bishaan oo ku beegan maalinta Axadaa ayaa lagu wadaa in shirka Maal gashiga Puntland ka furmo Magaalada Garowe ee Caasimada Maamulka Puntland sida qorshuhu yahey.
Madaxweyne Denni oo Nairobi ka bilaabay arin halis ku ah Farmaajo & Khayre
DEG DEG:Ciidamada Ina Cambaashe & Kuwa Beesha Isaaq oo qarka u saaran dagaal ka dhex qaraxa